Iyadoo kamaradaha tayo sare leh u gaar ah iPhone kasoo muuqdo, qaadashada sawir noqdo hiwaayad Meyeydaan. Click A iska ah camera iyo sawir la yaab leh waxa laga soo qaatay. Sida inta badan dhacda, sawiro siiyaan daqiiqado gaar ah ee dadka nolosha in ay yihiin haboon in la xasuusnaado, iyo iPhone ayaa noqotay telefoonada doorashada sabab u ah xallinta looga adkaan camera ay bixiyaan iyo qaababka kale ee la taaban karo.
Si kastaba ha ahaatee, waqti yar, sawirada u muuqdaan in ay ku hamineysay soo qaato oo badan oo boos ee telefoonka tan iyo markii ay badbaadiyey ee tirada badan oo. Sawirada Mararka ku hamineysay in ay hal dhibic ka dheehan bannaan ee loo isticmaali karo codsiyada ama hawlaha kale waxaa ay kor u isticmaalo. Sidaa darteed waxaa lagama maarmaan noqoto in muddo la siiyo ka dib markii aad kala cadeeyo xasuusta telefoonka aad uga takhalustid sawiro.
Hababka kala duwan ee photos tirka ka iPhone jiraan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la abuuro gurmad ah ee computer ka hor la tirtiro sawir kasta si ay sawiro si fudud loo soo kabsaday kara haddii si qalad ah la tirtiro. Kuwa soo socda waa hababka la heli karo in la tirtiro sawiro ka iPhone.
1. takhalusid Photos mid mid.
2. takhalusid sawiro badan.
3. takhalusid sawiro badan ee Waayaha
4. takhalusid sawiro ka Mac
5. takhalusid sawiro si joogto ah la SafeEraser Wondershare.
Tani waa mid ka mid ah hababka ugu fudud ee loo isticmaalo in lagu tirtirto sawiro. Waa habka ugu badan oo ku lug leeyahay tallaabooyinkan soo socda:
Burcad codsiga sawirka by siyoodba way dul shaashadda guriga.
Tubada sawirka aad rabto in aad tirtirto on.
Tubada on icon qashinka aad screen geeska xaq.
Your telefoonka weydiin doonaa haddii aad dooneyso in aad tirtirto sawirka, haddii ay sidaas tahay wax miiran tirtirto iyo sawirka laga tirtirayaa.
Halkii la tirtiro hal sawir waqti aad si fudud u dooran kartaa in aad tirtirto photos duwan ee hal mar. Takhalusid photos duwan ee hal mar oo keliya ma aha tashiilo waqtiga laakiin sidoo kale waxay bixisaa meel dheeraad ah oo aad ku iPhone xawaare aad u horeysay. Waxaa jira laba siyaabood oo aan sidaa yeelno. Habka koowaad ku lug leeyahay tallaabooyinkan soo socda:
Burcad codsiga Photos ah.
Tag Roll Camera.
Tubada on the "Dooro" button on geeska kore ee midig ee shaashada.
Waxaad calaameysaa dhammaan sawiro aad rabto in aad la tirtiro.
Tubada on Trash ku geeska hoose ee saxda ah oo ka mid ah shaashadda iyo sawiro calaamadeysan la dhaqaajin karin doonaan in ay qashinka.
Xaqiiji in aad rabto in aad tirtirto photos in aad dooratay oo riix tirtirto.
Haddii kale sawiro badan waa la tirtiri karaa via codsiga sawirka iyada oo tab daqiiqado. Si tan loo sameeyo, raac sawirada hoos ku qoran:
Tubada codsiga tab sawir aad screen guriga.
Hel tab sawirka hoose ee shaashadda oo ka jaftaa.
Photos ayaa si gaar ah loo diyaarin doonaa sida ay u muuqataa in goobaha.
Dhinaca geeska kore ee midigta, hel oo dooro view la joogo.
Daqiiqad kasta wuxuu leeyahay caption yar oo la doortay oo markii la doortay marks oo dhan sawiro la joogo in la siiyo.
Dhinaca hoose ee shaashadda, hel oo ka jaftaa icon qashinka iyo dhammaan daqiiqado ah la tirtiro doonaa ka dib markii aad xaqiijin.
Si aad u tirtirto sawiro badan oo in muddo aad u gaaban, raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Connect aad iPhone in aad Mac by cable syncing ah.
Burcad qabsaday image.
Meel ku Dooro qalab image qabashada ka iPhone.
Dooro meel u sawiradaada laga keeno ka dejinteeda arbushin ilaa menu.
Ka doorashada siiyey Dooro kale oo dajiyaan oo dhan sawiro aad u gal ah.
Press "Ctrl + A 'ka Mac in ay doortaan oo dhan sawiro.
Riix badhanka tirtirto.
5. takhalusid sawiro si joogto ah la SafeEraser Wondershare
Wondershare SafeEraser waa codsi mobile phone oo loo isticmaali karo in ay si joogto ah uga saarto faylasha tirtiray ka telefoonka. Xogtaasi la tirtiro ee xaaladaha kor lagu sharaxay ma yihiin si joogto ah tirray si fudud oo la soo kabsaday karo tan iyo markii ay ku riday gal ah oo dhowaan la isticmaalo. Haddii aad iPhone ku jira macluumaad xasaasi ah oo aad u doonayay in la sii hayo gaarka loo leeyahay iyo aad u malayseen in ay u tirtiray, waxaa la raadsan karaa taasoo keentay in tuugada aqoonsiga by user ah aan la ogalayn.
Si looga hortago dhacdooyinka sida, tirtire Wondershare ammaan ah loo isticmaalo. Waxaa ka saaraysaa oo dhan files tirtiray, oo ansixiyay xusuusta aad khasnado iyo taariikhda dhirta aad si joogto ah. Waxaa loo isticmaali karaa si joogto ah u tirtirto photos ee mobiilka iPhone ama adigoo raacaya tallaabooyinka hoose.
Download iyo rakib codsi ku saabsan telefoonka.
Ka dib markii la rakibey ee click on software 'masixi tirtiray files' on xasuusta hoose iyo habka iskaanka bilaabi doonaa ka.
Marka scan waa dhameystiran natiijooyinka soo socda ayaa la siiyaa muujinaya qayb kasta oo gaar ah .Intaa page natiijada oo ka mid ah files marsiiyey tirtiray guji "Sawirro" oo xulo "masixi Hadda"
Ku qor erayga "tirtirto" sanduuqa wada hadal. Tani waxay xaqiijin doontaa in aad rabto in aad tirto faylasha ah. Taas ka dib waxaad riixi kartaa "masixi hadda" in ay si guul leh baab'iyo sawiradiisii ​​aad rabto inaad tirtirto.
Marka taasi la sameeyo, fariin arbushin doonaa xaqiijiyay in faylasha lagu tirtiro si guul leh.
Permenently Delete Xogta iPad
> Resource > masixi > 5 Solutions in ay tirtirto Photos ka iPhone